Na-atụgharị uche taa n'otú ị kwụsi ike n'akụkụ Onyenwe anyị bụ Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwadebeere ya ụgbọ mmiri n'ihi igwe mmadụ ahụ, ka ha wee ghara ịzọpịa ya. Ọ gwọọla ọtụtụ n'ime ha, n'ihi ya kwa, ndị nwere ọrịa rịọsiri ya ike ka ha metụ ya aka. Mak 3: 9–10
Ọ na-atọ anyị ụtọ ma anyị cheta otú ọtụtụ ndị si hụ Jizọs n’anya, n’amaokwu ahụ dị n’elu, anyị hụrụ na Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwadebere ya ụgbọ ka ọ ghara ịkụda mmụọ mgbe ọ na-ezi ìgwè mmadụ ahụ ihe. Ọ gwọọla ọtụtụ ndị ọrịa, ìgwè mmadụ ahụ manye ya ịgbalị imetụ ya aka.
Ihe ngosi a nenye ayi ihe nlere nke ihe gha agha ime n’ime Onye nwe ayi. Enwere ike ịsị na ndị mmadụ nọgidesiri ike na nrara ha raara onwe ha nye Jizọs ma na-anụ ọkụ n'obi n'ọchịchọ ha nwere maka Ya. ma otu o sila dị mma ha nwere bụ ihe dị adị ma dịkwa egwu, nke mere ka ha lekwasị anya n’ebe Onye-nwe anyị nọ.
Nhọrọ Jizọs banyere ịbanye n'ụgbọ mmiri ma pụọ ​​ntakịrị n'etiti ìgwè mmadụ ahụ bụkwa ihe ịhụnanya. N'ihi gịnị? N'ihi na omume a mere ka Jizọs nyere ha aka ilekwasị anya ọzọ n'ozi ya miri emi. Ọ bụ ezie na ọ rụrụ ọrụ ebube n'ihi ọmịiko na igosipụta ike ya nke pụrụ ime ihe nile, nzube ya bụ́ isi bụ ịkụziri ndị mmadụ ihe na iduga ha n'eziokwu nke ozi ọ na-ekwusa. N'ihi ya, ịhapụ ha, a kpọrọ ha ka ha gee ya ntị kama ịnwa imetụ ya aka n'ihi ọrụ ebube nkịtị. Nye Jizọs, mmụọ ime mmụọ ọ chọrọ inye ìgwè mmadụ ahụ dị mkpa karịa ọgwụgwọ anụ ahụ ọ bụla o nyere n'onwe ya.
N’ime ndu anyi, Jisos nwere ike “ikewapu” n’ebe anyi no n’uzo ndi n’enweghi enyo ka anyi wee nwehe oghe maka ndu miri emi karie ma gbanwee. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike iwepu ụfọdụ nkasi obi ma ọ bụ kwe ka anyị chee ule ụfọdụ ihu nke ọ dị ka ọ bụ obere oge ka anyị nọ. Mana mgbe nke ahụ mere, nke a bụ otu anyị ga-esi echigharịkwuru Ya n'ụzọ miri emi nke ntụkwasị obi na imeghe ka e wee dọrọ anyị nke ọma karị inwe mmekọrịta ịhụnanya.
Na-atụgharị uche taa n’otù iguzosi ike n’ebe ị nọ n’ebe Onyenwe anyị nọ dị. Site n’ebe ahụ, tụgharịa uche kwa, ọ bụrụ na ị nwere mmasị karị n ’ezi mmetụta na nkasi obi ị na-achọ ma ọ bụ ọ bụrụ nraranye gị dị omimi, lekwasikwuo anya n’ozi mgbanwe nke Onye-nwe anyị chọrọ ikwusara gị. Hụ onwe gị n'ụsọ osimiri ahụ, na-ege ntị na Jizọs na-ekwu ma kwe ka okwu ya dị nsọ gbanwee ndụ gị nke ọma.
Chineke m, Onye Nzoputam, echighariwo m Gi ta ma n tryguzo iguzosi ike na ihunanya m na ntinye Gi. Nyere m aka, na mbu, ige ntị n’okwu Gị na-agbanwe ma kwe ka Okwu a bụrụ isi ndụ m. Jesus ekwere m na gị.